Jadwalkii doorashada Galmudug oo gabi ahaanba meesha ka baxay, Warbixin – Hornafrik Media Network
Iyadoo maanta ay ku beegan tahay waqtigii loo qorsheeyey inay dhacdo doorashada Madaxweynaha maamulka Galmudug iyo ku xigeenkiisa ayaa haatan waxaa muuqanaysa in ay dib u dhacday, maadaama aan weli la soo xulin Xildhibaannada cusub ee uu yeelan lahaa maamulka Galmudug.
Dib u dhaca doorashada madaxweynaha Galmudug iyo ku xigeenkiisa ayaa arintan waxaa ka hadlay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Shacabka ayaa qaarkood waxay qabaan rajo wanaagsan oo ah inay dhawaan Dhuusamareeb ka dhacdo doorasho, halka kuwa kalana ay sheegayaan in weli culeysyo badan ay ka jirto dhismaha maamulka Galmudug.
Qaban qaabadii ugu dambeysay ee xareynta Odayaasha dhaqanka ee soo xulaya Baralmaanka labaad ee Galmudug ayaa ka soconeysa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ayaa wada sidii loo dhameystiri lahaa odoyaasha dhaqanka ee soo xulaya Xildhibaannada, iyagoo guddiga hoosta ka xariiqay in muddo seddax cisho ah ay u qabteen xalinta ciddii cabasho ka qabta soo xulista odoyaasha dhaqanka.
Shalay ayay ahayd markii Xildhibaanno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb, waxaana magaalada Dhuusamareeb hada ku soo qul qulaya xildhibaano, siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaasi oo doonaya in ay door ku yeeshaan habka ay u socota dhismaha maamul Galmudug oo loo dhan yahay.
Guddiga Farsamada maamul dhisidda maamul goboleedka Galmudug ayaa kol hore sheegay in soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ay bilaabaneyso 29-ka Bishii November ee la soo dhaafay hase yeeshee taasi ma suuraabin.
Sidoo kale guddiga ayaa ku sheegay jadwalkoodii hore in doorashada guddoonka baarlamaanka Galmudug ay dhici doonto 13-ka ilaa 16-ka bishan December, halka doorashada madaxweynaha Galmudug la doonayey inay bilaabato maanta oo ah 17-ka bisha Decenber, inkatoo howlahaas oo dhan ay dib u dhaceen, hadana guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ayaa laga sugayaa inay mar kale soo saran jadwal doorasho.